नेपाल आज | जनभावना बिपरित अर्थमन्त्रीले कुकर्म गरे, भन्डाफोर गर्ने डा. केसीको चेतावनी
समाचार अन्तरवार्ता भिडियो
जनभावना बिपरित अर्थमन्त्रीले कुकर्म गरे, भन्डाफोर गर्ने डा. केसीको चेतावनी
आइतबार, १० साउन २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज
राजनीतिक विश्लेषक प्रा. डा. सुरेन्द्र केसीले जनभावना बिपरित कुकर्म गर्नेतर्फ लागे माओवादी केन्द्रका तर्फवाट वनेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल आजसँगको विशेष सम्वाद कार्यक्रममा वोल्दै उनले मन्त्री शर्मा आफ्ना मित्र भएपनि गलत गर्नेतर्फ लागे नछोड्ने वताए । ‘नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेको माओवादी केन्द्रले डेढ वर्षपछि हुने चुनावलाई लक्षित गरेर गृहमन्त्रालय छोडी अर्थ मन्त्रालय लियो भन्छन नी, यसको के कारण हुन सक्छ ?’ भन्ने नेपाल आजको प्रश्नमा उनले भने–‘अर्थ त सवैलाई चाहिन्छ, त्यसैले पनि होला। प्रमुख कारण त धेरै परको विषय हो, ति मध्येको प्रमुख कारण एउटा यो पनि हो। परेछ, भने समयमा भनौला। उनी मेरा पनि मित्र नै हुन। यो पटक छोडिदिउँ।’
मन्त्री भएपछि जनार्दन शर्मालाई आफुले ‘वदनाम हुने काम नगर्नु होला’ भनेको स्मरण गर्दै उनले भने–‘जे गल्ती विगतका नेताहरुले गरे, त्यो गल्ति नदोहोर्याउनु होला। भनेको छु। वहाँले पनि त्यहि गर्नु भयो भने त सवै कुरा वाहिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ।’
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले रामवहादुर थापा ‘वादल’वाट सिक्षा लिएर जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री वनाएको हुन सक्ने वताएका केसी थपे–‘निकटको नेता हो। पहिलाको मन्त्रालयवाट नाम कमाएका अवस्था पनि छ। गृहमन्त्री पनि भएका हुन । जलश्रोत मन्त्री हुँदा कुलमानलाई जन्माए र नेपाल लोडसेडिङ्ग मुक्त भयो। त्यस्तो वदनामी पनि मैले जनार्दनको सुनेको छैन। अनुभव का आधारमा उनले यो जिम्मेवारी दिएको हुन सक्छ।’
डा. केसीले ओली प्रवृत्तिलाई समाजले र राजनीतिले अस्विकार गरेपनि केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याउनेहरुलाई चै दण्डित गर्नु पर्ने वताए । ‘केपी ओलीले संसद विघटन गर्छन, मध्यवाधिमा जान्छन भनेर भविष्यवाणी गर्नु भएको थियो। दुई चोटी विघटन भयो। केपी ओली प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘त्यो प्रवत्ति केपी ओलीको भन्दा पनि खतरना जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यो प्रवत्ति भनेको केपी ओली जन्माउने, केपी ओलीलाई वल दिने प्रवृत्ति हो । त्यो प्रवृत्ति के चाहान्थ्यो भने एउटा केपी ओली जस्तो पात्रलाई त्यहाँ पुर्याएर आफनो उल्लो सिधा गर्न चाहान्थ्यो ।’
जुनसुकै पार्टी भित्र पनि संगठित सदस्यको संरचना हुने र त्यो संरचना सिंगो पार्टीको सवैभन्दा अगाडि वढेको दस्ता हुने भन्दै उनले त्यहि दस्ताले निर्वाचित गराएपछि चै केपी ओली उत्पन्न हुने अर्थात पार्टीको अध्यक्ष हुने वताए । ‘त्यो दस्ताले आत्मविवेचना गर्नु पर्यो, केपी ओलीलाई मात्र लखेटेर हुन्छ ? अमेरीकामा डोनाल्ड ट्रम्पलाई कसरी विदा गरीयो र नेपालमा ओलीलाई कसरी विदा गरियो ? केपी ओली र ट्रम्पमा केहि फरक छैननी’ उनले भने–‘तर, ट्रम्पलाई एउटा पद्धती वाट विदा गरियो, केपी ओलीलाई चै गैरराजनीतिक पद्धतीवाट चै विदा गरियो। आफनै दलले। अहिले कत्रो गौरव छ माधवकुमार नेपालहरुलाई की हामीले केपी ओलीलाई त्यहाँवाट विस्थापित गरायौं भनेर। अव पार्टी अध्यक्षवाट पनि विस्थापन गराउँछौं भन्दैछन। ल मानियो, विस्थापित भए । त्यहाँ माधव नेपाल आए। भोली केपी ओलीको ग्याङले तेहि गर्छ। अनि के हुन्छ भन्नु त। किनकी तपाईले मलाई मुख छोडनु भयो भने त म पनि मुख छोड्छु। तपाईले मलाई रेस्पेक्ट गर्नु भयो भने म पनि रेस्पेक्ट गर्छु ।’
केपी ओलीले सवैलाई अपमानित गरे । प्रचण्डलाई र माधव नेपाललाई अपमानित गर्न छोडनन् भन्ने प्रशंगमा ‘त्यस्तो साधारण सदाचार नजानेको, ब्यवहार पनि नजानेको मान्छेलाई किन त्यहाँ पुर्याएको त त्यसो भए’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । अहिले ओलीलाई सदाचारको पाठ सिकाउने र लखेट्नेहरुले नै ओलीलाई त्यहाँ पुर्याएको तर्क गरेका उनले भने–‘हामीले पुर्याएको होईननी। त्यस्तो मान्छेलाई किन लगेको त त्यहाँ ? विचार नगरेपछि त फसिन्छ नी त।’
‘ओलीले दुई÷दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। उनले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले नसुती–नसुतीकन राति–राती, कहिले १२ वजे, १ वजे, विभिन्न दलहरुको आलोचना सुन्दै। जे भन्यो तेही सदर गर्दै जानु भयो। राष्ट्रपति भण्डारीको भुमिकालाई चै कसरी हेर्नु हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा डा. केसीले उनको एकदम अस्वभाविक, अशिस्ट र अस्विकार्य रहेको वताए । ‘राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा वहाँले मेन्टेन गर्नु भएको छैन । तर म यसलाई त्यत्रो ठुलो विषय मान्दिन। किन भने राष्ट्रपति पदमा त्यो लेभलको मान्छे पुर्याउने नै होईन क्या। राष्ट्रपति भनेको त यो देशको नम्वर वान हो नी त। यो देशको नम्वर वान नै कसैको श्रीमती भएको कारणले पुर्याइन्छ भने तपाई त्यहाँवाट के भुमिका आशा गर्नु हुन्छ भन्नु त ?’ उनले थपे–‘आशा गर्ने ठाउँ नै केहि थिएन। मैले यो कुरा सुरुदेखि उठाएको थिए । पुष्टि पनि भयो। विद्या भण्डारी भनेको मेरो विद्यार्थी। ठ्याक्कै म भोजपुर क्याम्पसमा पुग्नु र वहाँ त्यहावाट विराटनगरमा झर्नु एकै महिनामा भएको थियो । मैले ठ्याक्कै क्लास लिन चै पाईन, तर म त्यसरी चिन्छु नी त वहाँलाई ।’
त्यसपछि विद्याको मदन भण्डारीसँग विवाह भएको र मदन भण्डारीको निधनपछि त उनले फर्केर हेर्नै नपरेको केसी वताउँछन् । ‘यो आधारमा मान्छेको पदोन्नती हुन हुन्छकी हुँदैन भन्ने प्रश्न हो क्या यो’– उनले भने ।
राष्ट्रपति भण्डारीले शेरवहादुर देउवालाई सपथग्रहण गराउने क्रममा सामान्य सिस्टाचार पनि मेन्टेन नगरेका, वधाई नदिएको, नियुक्तिको भाषा पनि विवादीत भएको र सपथ ग्रहण पनि लम्विदै गएर पाउनाहरु कुरेर वस्नु पर्ने अवस्था आएको विषयमा उनले यसमा पनि पहिलाकै कुरा दोहिरीने जिकिर गरे । ‘वहाँले त्यो पदको गरिमा नै वुझ्नु भएको छैन । अनि वहाँले गरिमा नवुझेपछि त्यसको फर्म्यालिटी पनि पुरा गर्न सक्नु हुन्न’ उनले भने–‘जहाँसम्म नियुक्तिपत्रको भाषा हो, त्यो फेरी वहाँको सहि थियो । वहाँलाई (देउवालाई) वास्तवमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको होईन, अदालतको परमादेशले नै नियुक्त गरेको हो । तर, यीनीहरु (प्रचण्ड–माधव–शेरवहादुर) ले थर्काएर त्यहाँ पनि विद्या भण्डारीलाई झुकाए । त्यो पद कसैले थर्काउने पद होईन। त्यो पदमा कस्तो मान्छे जाने भन्ने चै हामीले पहिला सोच्नु पर्छ। गईसकेपछि चै त्यसको गरिमालाई फेरी मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ । विद्या भण्डारी जस्तीसुकै हुन नी, अव त्यो पद त हाम्रो होनी त। यहाँ चै फेरी विद्या भण्डारीले गलत गरेको छैन।’
तर, आफुले गलत गरेका विगत समयका कुकर्मको कारण उनको मनोदशा सिथिल भईसकेको र प्रचण्डले एकचोटी थर्काउने वित्तिकै हल्लिएको केसीको वुझाई छ। तर, यो घटनाले मुलुकमा भोलिका लागि नराम्रो नजिर छोडेको छ उनले वताए ।
‘शेरवहादुर आफु प्रधानमन्त्री हुन चाहेकै थिएनन्, प्रचण्ड र माधवले धेरै कर गरेपछि मात्रै अघि वढेको भन्ने छ नी ?’ भन्ने प्रश्नमा केसीले भने–‘त्यो सत्य हो, धेरैले भनेका होईन, मैले नै भनेको हो । अहिले शेरवहादुर भनेको नेपाली कांग्रेसको सरकार होईन, जनादेशको सरकार पनि होईन, प्रचण्डको सरकार हो। माधव नेपालको मतियारीमा निर्माण भयो । एकदमै अनैतिक सरकार हो यो, अनैतिक स्थितीमा अहिलेको सरकार छ। किन भने अर्को दलको पयट (सपोर्ट) लगाएर अनि कुनै अर्को प्रधानमन्त्री हुनु भनेको डेमोक्रेसीमा उपयुक्त हुँदैन । किन पनि उपयुक्त हुँदैन भने नेपाली कांग्रेसलाई ५ वर्षसम्म नेपाली जनताले प्रतिपक्षको आदेश दिएका हुन । लोकतन्त्रमा सार्वभौम सत्ता भनेको चै जनतासँग नै हुन्छ। अव तपाई प्रधानमन्त्री वन्न चाहानुहुन्छ भने अर्को जनादेशमा जानुपर्छ। त्यो जनादेश लिएर मात्रै तपाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । सव अनैतिक छ, अराजनीतिक छ। कांग्रेस तठस्थ वसेर माधव नेपाल र प्रचण्डलाई ‘ठिक छ तिमिहरु नै हौ वावु हो’ भन्नु पथ्र्यो । तपाईहरुको यो जुन नाङ्गो नाच छ, तपाईहर नै नाचिरहनोस। ५ वर्ष हामीलाई केहि भन्नु पर्दैन – यो भन्नुपथ्र्यो । त्यो भनेको खण्डमा आउने निर्वाचनमा आफै दुई तिहाई ल्याउँथ्यो कांग्रेसले । र म आफै त्यसको प्रचारमा हिड्छु भनिसकेको थिए । यिनीहरुलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने हिसावले। तर, अव शेरवहादुरलाई प्रधानमन्त्री वन्न हतार भयो। अव फेरी केपी ओलीको पालो आउने खतरा भयो । अन्याय भयो नी त केपी ओली माथि, अन्याय भयो नी त विद्या भण्डारी माथि। ५ वर्षको जनमत लिएर आएको प्रधानमन्त्रीलाई आफनै दल प्रयोग गरेर त्यहाँवाट वेदखल गरियो। सम्मानित भईसकेको राष्ट्रपतिलाई परमादेशवाट झुकाउने काम गरियो, अन्याय भएन त्यो ?’
पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाललाई चै ओलीले न्याय गरेत ? भन्ने नेपाल आजको जिज्ञासामा केसी भन्छन्–‘वहाँहरुलाई के अन्याय भयो र ? प्रचण्डको कुरा गर्दा खेरी अढाई÷अढाई वर्षको प्रधानमन्त्री वन्ने कुरा थियो । वहाँले छोड्नु भो। र के भन्नु भो भने– ५ वर्षकै प्रधानमन्त्री केपी ओली हो। पावर सेयरिङ्ग नगरेको हुनाले मात्रै प्रचण्ड असन्तुष्ट भएको भन्ने कुरा त स्थापित भयो नी। अव माधव नेपालको कुरा गरौं । वहाँले चै महाधिवेशनमा केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु भयो । वहाँ पराजित हुनभो। अव ५ वर्ष त कुर्नु पर्लानी त ? कि जहिले चाह्योे तहिले पार्टीको नेता हुने हो ? केपी ओलीभण्दा असल नेता माधव नेपाल हो त मै भन्छु। यि जम्मै नेता भन्दा डायनामिक नेता प्रचण्ड हो पनि मै भन्छु । तर, उनीहरुले गलत पद्धति अख्तियार गरे।’
‘अदालतवाट एमाले ब्युँतिएपछि माधव नेपाल एमालेमा फर्किएर प्रतिगमन विरुद्ध लड्नुभयो। ठुलो साहस देखाए आफनो कदम चाल्नुभो। साहसिक काम गर्नु भो’ भन्ने जमात पनि छ नी ? भन्ने प्रश्नमा ‘हुँदै नभएको कुन प्रतिगमन विरुद्ध नेपालले लडे ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरे । ‘प्रतिगमन भनेको के हो ? ति मान्छेले त्यो त वुझ्छन ? यदि प्रतिगमन हुन्थ्यो भने केपी ओली लुरुलुरु वालकोट पुग्थे होला त ? खै प्रतिगमन ? वहाँलाई वहुमतले नो भन्दियो, थपक्कन वहाँ वालकोट जानु भो– कुरा सकियो। यो प्रतिगम थिएन, मिस लिडिङ्ग थियो । वास्तममा यो स्वेच्छाचारीता मात्रै थियो । केपी ओली दम्भी र स्वेच्छाचारी शासक थिए । उनी दण्डित हुनु जरुरी थियो । तर, यो प्रणाली ठिक भएन। जनताले ठिक गर्ने हो लोकतन्त्रमा– नेतालाई’ उनले अगाडि थपे–‘राजतन्त्रमा राजाले तँ नआउने आजदेखि भनेपछि सकियो कुरा। लोकतन्त्रमा पनि नेताको तेहि नियती ? त्यसो भए लोकतन्त्र किन ल्याउने हामीले ? ठिक छ, स्वेच्छाचारी इत्यादी गर्यो भने त के गर्ने अव ? जनताले दण्ड दिने होला नी त। किन भने जनता नै सार्वभौम हुन्छ लोकतन्त्रमा । यो जुन नजिर हो गलत छ। प्रधानमन्त्रीलाई यसरी वेदखल गर्नु उचित छैन, राष्ट्रपतिलाई यसरी नङ्ग्याउनु उचित छैन। यदि राष्ट्रपतिको गरिमा चाहेको हो भने उपयुक्त ब्यक्ति पुर्याउनु पथ्र्यो । अव भईसक्यो राष्ट्रपति, त्यसलाई त सम्मान गर्नुपर्छ ।’
केपी ओलीलाई पाँच वर्षे कार्यकाल सक्न दिनुपथ्र्यो । महाधिवेश या अर्को निर्वाचनवाट दण्ड दिने वा छुट दिने हो भन्न खोज्नु भएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘मैले भन्न खोजेको होईन, डेमोक्रेटिक प्राक्टिस त्यहि हो। त्यति पनि पर्खिनु पर्दैनथ्यो। पार्टी संसदिय दलको वैठक राख्यो हटाई दियो– सकियो । पार्टीको महाधिवेशन आयोजना गर्यो, माधव प्रचण्ड मिल्यो। हटाईदियो, सिद्धिहाल्यो नी त।’
नियमानुसार गएको चैतमा नै एमालेको महाधिवेशन हुनु पर्नेमा केपी ओलीले गत भदौमा नै माधव नेपाललाई प्रकृयागत अध्यक्ष लिन आग्रह गरेको वताउँदै उनले प्रकृयाभन्दा वाहिर जानु कसैका लागि पनि सहि नहुने संकेत गरे। ‘भदौमा ओलीले के भनेका थिए भने– सम्भव हुन्छ भने चैतसम्म पर्खिदिनोस, सम्भव हुँदैन भने मंसिरमै महाधिवेशन गर्नोस म छोडदिन्छु । चैतको महाधिवेशनमा म प्रतिपर्धा नै गर्दिन। तपाईहरु नै अध्यक्ष हुनोस तर प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल मलाई पुरा गर्न दिनोस’ उनले भने–‘तर त्यो वाटो अख्तियार गरिएन। यो वाटा अख्तियार गरियो ।’
प्रचण्डको रोल र अवको योजना के हो ? भन्ने जिज्ञासामा डा. केसीले भने–‘प्रचण्डको त केपी ओलीलाई ठेगान लगाउनु थियो– लगाए । अव आफुलाई जे मन लाग्यो त्यहि गर्छन । प्रचण्डको एउटा के स्वभाव रछ भने पावर एक्सरसाईज गर्ने मनोवृत्ति रछ। पावर भन्दा पर, उनी पानी विनाको माछा जस्तो। धेरै उनले धम्क्याए केपी ओलीलाई, सम्झाउन खोजे, सहकार्य गर्न खोजे तर केपी ओलीको पनि साथिभाईलाई मिलाएर लानु पर्छ संस्कार रैनछ फेरी। केपी ओलीको सरकारलाई सवैभन्दा धेरै संरक्षण गर्ने फेरी प्रचण्ड नै थिए। सरकारले काम गरिरहेको छ। यो सरकार पाँचै वर्षको हो भनेर धेरै वटा अन्तरवार्तामा वहाँले भन्नु भएको थियो । यो प्रचण्डको आफनै गल्ति थियो। किन भने अढाई/अढाई वर्षको प्रधानमन्त्रीको सहमतिवाट वहाँहरुले पार्टी एकता गर्नु भएको थियो ।’
प्रा. डा. सुरेन्द्र केसीसँग नेपाल आजका लागि प्रस्तोता माधव गुरागाईले गरेको कुराकानी हेर्न तलको भिडियोमा क्लिक गर्नु होला।